प्रकाशित : 9:27 am, सोमबार, पुस २७, २०७७
काठमाडौं । काठमाडौं भ्यू टावरको निर्माण कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । निर्माण शुरु भएको ६ वर्ष बित्न लागे पनि हालसम्म एक चौथाइ पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
२०७२ कात्तिकदेखि निर्माण शुरु गरिएको भ्यू टावरको हालसम्म करिब २५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ विल्डर्स प्रालिबीच २०७१ फागुन २२ गते ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीको लापारबाहीका कारण टावर निर्माण गति लिन नसकेको हो ।
६ वर्षमा भ्यू टावर निर्माण अन्तर्गत जमिन मुनि फाउन्डेशन राख्ने काम सकिएको छ भने जमिनमाथि पिलर राख्ने काम भइरहेको छ । जुन समग्र निर्माणको करिब २५ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो ।
भ्यू टावर निर्माण अन्तर्गत हालसम्म जमिन मुनि फाउन्डेशन राख्ने काम सकिएको छ भने जमिनमाथि पिलर राख्ने काम भइरहेको छ । समग्रमा २५ प्रतिशत हाराहारीमा काम भएको छ । हाल दैनिक १०० जना जनशक्तिले निर्माण गरिरहेको सो भ्यू टावर कोभिडका कारण ८ महिना ठप्प रहेको थियो । भ्यू टावरमा जमिनमाथि ११ र जमिनमुनि तीन तला निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
महानगरपालिका अन्तर्गत भौतिक विकास प्रमुख राम थापाका अनुसार कोभिड १९ का कारण केही ढिला भएकाले निर्माण अवधि १ वर्ष समय थप गरिएको छ । सो समय समेत बित्नै लागे पनि एकचौथाइ मात्र सम्पन्न भएकाले आयोजना नै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।निर्माण कम्पनीले कोरोनाका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए पनि कोरोना अघिको ५ वर्षमा पनि अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन् ।
भ्यूटावर निर्माणकर्ता मनोज भेटुवालले थपेको समय (आगामी भदौसम्म) मा भ्यू टावरको बेसमेन्ट क्लीयर गरेर बसपार्क सार्न दिनुपर्ने छ । सो कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा भवन निर्माण नभए पनि त्यसको भाडा महानगरपालिकालाई अनिवार्य तिर्नु पर्ने थापाले बताए ।
निर्माण कम्पनीले पुरानो बसपार्क ( हाल भ्यू टावर निर्माण स्थल) को भाडा अहिले वार्षिक ६५ लाख तिर्दै आएको छ भने टावर बनिसकेपछि वार्षिक २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । थपिएको अवधिसम्म निर्माण पूरा नभएको खण्डमा निर्माण कम्प्नीले महानगरपालिकालाई भाडा बापत ७० लाख वार्षिक तिर्नु पर्ने छ । सो रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने पूर्वाधार प्रमुख थापाले बताए ।
‘निर्माणमा जति ढिलाई गर्यो त्यति उसैलाई घाटा छ, भ्यूटावर बने भाडा उठाएर पैसा तिर्न उसैलाई सजिलो हुने हो, अब म्याद सकिएपछि भ्यू टावर बने पनि नबने पनि भाडा तिर्नै पर्छ,’ थापाले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
कम्पनीले निर्माणको काम भने २०७३ साउन ३० गतेबाट शुरु गरेको थियो । सम्झौतानुसार ५ वर्षभित्र ती कम्पनीले आफ्नो लगानीमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म चलाउन पाउनेछन् ।
नियमानुसार सम्झौतानुसार निर्धारित समयमा नै काम नसकेमा एक पटक दुई वर्षका लागि समय थप्न मिल्ने छ । भ्यू टावर निर्माणको लागत ४ अर्ब ७० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
टावरको सबैभन्दा तल्लो तल्लामा बस पार्किङ स्थल बनाइने छ । त्यसको माथि दोस्रो तल्लामा हलुका गाडी पार्किङ स्थल, व्यवस्थित चलचित्र घर, पौडी पोखरी, खाजाघर, बैंक तथा महानगरपालिकाको वडा कार्यालय समेत रहनेछन् ।
भ्यू टावरका लागि २३ रोपनी ५ आना जग्गा छुट्याइएको छ । सोमध्ये ४० प्रतिशत भूभागमा टावर बन्नेछ भने ६० प्रतिशत भाग खाली राखिनेछ । सो टावर नेपाली कला संस्कृति झल्किने खालको हुनेछ । टावर निर्माण भएर सञ्चालनमा आए ५ हजार ५०० व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने बताइएको छ
« ३ दिनमा कतिले भरे चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ ?
के कोरोनाको खोप उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनीले विश्व बजारको माग पूरा गर्न सक्लान् ? »